Saraakiisha Faransiiska oo sheegay in la dilay ninkii ka dambeyay Weerarkii Paris. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaSaraakiisha Faransiiska oo sheegay in la dilay ninkii ka dambeyay Weerarkii Paris.
Saraakiisha ciidanka baarayaasha Faransiiska ayaa xaqiijiyay in la dilay ninkii abaabulay weerarradii magaalada Paris lagu qaaday Jimcihii la soo dhaafay, kuwaasoo lagu dilay in ka badan 129-qof, ayna ku dhaawacmeen 350-qof oo kale.
Baarayaasha Faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen maydka Abdelhamid Abaaoud, kaasoo la sheegay inuu haystay dhalashada dalka Belgium, balse uu asal ahaan kasoo jeedo waddanka Marooko.
Sidoo kale, Abdelhamid Abaaoud ayaa la sheegay inuu ku barbaaray degmada Molenbeek oo ka tirsan magaalada Brussels ee xarunta waddanka Belgium, taasoo ay u badan yihiin Carabta muhaajiriinta ah ee Belgium-ka ku nool; kuwaasoo ay halkaaas ku haystaan shaqo la’aanta iyo guryaha buux-dhaafay.
Abaaoud ayaa la sheeegay inuu 27-jir ahaa, iyadoo lala xiriiriyay Saalax C/saalam, kaasoo dhuumaaleysi ku jira, walaalkiisna uu isku qarxiyay caasimadda Faransiiska ee Paris.
Saraakiisha baarayaasha dalka Faransiiska ayaa xusay in Brahim oo ay walaalo ahaayeen Saalax C/salaan uu ku dhintay Comptoir Voltaire bar, isagoon aan wax dad ah dilin, halka lix kaloo jihaadayaal ah ay ku qaadeen weerar lagu riiqmay goob kale.
Dhanka kale, Abaaoud ayaa lagu xiray dalka Belgium sannadkii 2010-kii, kaddib markii lagu eedeeyay inuu dhacay hub kala duwan, waxaana lala xiray xilligaas Saalax C/salaam.
Ugu dabeyn, Abaaoud oo loo yaqaan Abu Umar al-Baljiki ayaa ku biiray kooxda dowladda Islaamka ah ee Daacish/ISIS horraantii sannadkii 2013-kii, wuxuuna tan iyo xilligaas u dagaalamayay kooxdan.